Primrose kuyinto zisetshenziswa obkonika isitshalo potted ukuthi blooms cishe unyaka wonke. fleecy amahlamvu elikhulu le mbali ziqoqwa e rosette omangalisayo, okuyinto zitholakala phezulu inflorescence izambulela pink elithambile, omhlophe, onsomi. Primula has a uhlamvu kunalokho ezingezwakali, kodwa, naphezu kwalokhu, kuthandwa kakhulu in ukulima zasendlini. Kuze kube manje, kukhona izinhlobonhlobo yendabuko primrose kanye nzalo entsha enkulu-Dutch.
Lesi sihloko uzokutshela ngokuningiliziwe ukuthi primrose. Ezikhula imbewu ekhaya ukunakekelwa kahle lesi sitshalo beyoba kwagxilwa yethu.
Habitus, isikhathi izimbali kanye ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama agrotechnics primrose obkoniki awubeka belingana pelargonium futhi Saintpaulia.
Obkonika kukodwa izitshalo ezincane ezimbizeni okusezingeni eliphezulu mayelana 30 cm. Empeleni, kubhekwa zisetshenziswa, kodwa izimbali obuningi kakhulu ububonisa onyakeni wokuqala, ngakho ukuzijayeza Simila njengenhlangano izitshalo yonyaka noma zisetshenziswa. Ngalesi imbiza rosette ngempela aluhlaza namahlamvu ezinkulu Velvety. Leaf ukuma - onqenqemeni imikiswe - mihlobiso. Amapheshana zitholakala eside petioles pubescent. Izimbali iqala emhlabeni ngenyanga 5th emva kokutshala. Ngalesi sikhathi, le mbali livela esidayisa namahlamvu 8-10.
Primula obkonika grandiflora imelele umndeni (ubukhulu 6-8 cm imbali). Izimbali eqoqwe in a izambulela multi-ezinemibala nge umoba eside, futhi ukunqoba lo amahlamvu aluhlaza. Ngesikhathi esifanayo e isitshalo esisodwa kuziwa 10 sifanamsindvo. Uma zokutshala kwenziwa ehlobo ke eziqhakaza obkonika ngokuqhubekayo kusukela Februwari May, kulandelwa break ehlobo, futhi kabusha izimbali avele ekwindla, ngeke bayibeke phansi uDisemba.
izici eziphilayo amamaki
ukutshalwa ngempumelelo kuleli gumbi ezinhle kuyobenza kakhulu kuxhomeke ulwazi ezinye izici begazi kwezinhlobo:
Ngokwemvelo, lokhu imbiza ukhetha uqimba engezansi flora nakwezifudumele, amawa, usebe amadamu, ngakho obuhle Ukukhanya kwelanga kodwa okusabalele, inhlabathi olumanzi kanye aeration ezinhle ohlelweni impande.
Obkonika (ikhaya primrose) ekhula kahle okuxekethile inhlabathi izakhi ne ukusabela wavuma acid. substrate Obkoniki wenza kusuka Peat kanye leaf emhlabeni - lezi zingxenye lokulawula asidi.
Naphezu kweqiniso lokuthi lesi simila kungokwalabo flora zamazwe aphathelene nezindawo, likhula kahle efudumele esipholile ngisho cool (15-17 degrees). Lokhu primrose lokushisa Kufanele sizivumelanise umbuso ukukhanya iqembu lethu laziwe kakhudlwana.
obkonika Primula primulas ihluke kwezinye ukuze kumiswa efihlekile akadingi okushisa cool nokuzola. Uma unikeza ke ngokunakekela efanele, kungaba eziqhakaza unyaka wonke - ebusika kanye ekwindla on window sill, entwasahlobo nasehlobo - embhedeni noma emphemeni.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi obkonika kungabangela ukusabela nomzimba. Kulokhu, it is njengenkulumo anobuthi. Lapho zizalela yayo is hhayi Kunconywa ukubeka imbali ekamelweni noma lezingane.
Primula: ezikhula imbewu ekhaya
Khulisa obkoniku imbewu primrose. Njengoba ehlwanyela phambi zezimbali ubabonisa cishe izinyanga eziyisithupha. imbewu imila ibe nenhlabathi ingxube ekhethekile of Turf nesihlabathi. Imbewu ezihlwanyelwe ngqo phezu phansi, akukho phezulu prisypaya. Umthamo ke kudingeka amboze ingilazi, bese fafaza njalo enhlabathini. Uma sihlale lokushisa elikhulu (20-22 degrees), amahlumela izovela amasonto 2-3. Ngemva kwalokho, kudingeka ubeke endaweni elikhanyayo, futhi izinga lokushisa kuyinto mncinyane.
Lapho amahlamvu yokuqala yeqiniso, izithombo ukucwila emanzini ngokuphelele. Ibanga phakathi kwabo kufanele kube 3-4 cm. Ngakho bayokhula kuze kuba ezihambisanayo. Khona-ke ebanjwa Swordplay yesibili, izithombo Primrose obkoniki ngenkathi ehlezi ngemuva cm 8 kuphela. Uma emva Pick yesibili, izitshalo ayophinde eduze (amaqabunga izitshalo engumakhelwane sizoxhumanisa), angase utshalwe ebhodweni. Manje ungaqala ukondla imbali. Ngenxa yale njongo, isixazululo yenkukhu umquba, amaminerali Umanyolo noma isixazululo mullein.
Ngakho landa obkonika primrose. Lokuzaliswa isiyi-isimila esesikhule singenzeka ngezindlela ezimbili: by cuttings noma division of imbali. It ikhiqizwa phakathi izimbali zawo ziwukudla obkoniki.
Namuhla, i-obkonika ezivamile esephetha abalimi Dutch. Kodwa izinhlobo ezindala ezibangela komzimba, esikhundleni esisha, izinhlobo esenziwe ngcono kanye nzalo.
1. Quality ngithinteni ( "ngithinteni"). Izimbali lokhu primrose ezihlukahlukene likhulu ngobukhulu futhi ezihlukahlukene imibala. Kodwa into ebaluleke kakhulu ihlukile - lokhu primrose ephephile ezempilo, ke akakubangeli komzimba. yokuqhuma Peak kuyinto entwasahlobo and ekwindla.
2. Mahhala F1 - lolu hlobo we-evening primrose futhi akabubangeli komzimba, njengoba akusho bungakhiphi Primin. Kuleli qembu, 9 ezahlukene umbala shades, ikakhulukazi zihlukaniswa kusukela isisindo ingqikithi izimbali umbala owolintshi kanye-ngemibala emibili.
3. Umusa - izitshalo ezinkulu-compact ezihlukahlukene ezinemibala egqamile: white, blue, pink, obomvu, onsomi.
Primrose ke Moody kakhulu endlini isitshalo, kodwa uma wazi ukuthi yini uthande obkonika primrose indlela yokunakekela imbali kahle, kungaba ngisho ubizwe linesizotha.
Ukuze silungiselele obkoniki kokwehla ukukhanya ingxube friable sakhiwa izingxenye ezihlukahlukene zenhlabathi: Peat acid, Turf kanye emhlabathini sheet, isihlabathi indawo. Ungathenga ngomumo eyenziwe potting umhlabathi.
Imbali indawo nalo libalulekile. Njengoba sazi ukuthi obkonika primrose uncamela sikhule ekukhanyeni okusabalele elangeni ke isuswe. Ngokwesibonelo, kungashiwo abeke etafuleni eduze kwefasitela noma emphemeni lapho kufihla izitshalo emikhulu.
Ebusika, primrose wagqoka sill eningizimu noma empumalanga iwindi. Kukhona-ke ilula ngokwanele futhi kancane ngezansi ekamelweni lokushisa. Amazinga ekahle obkoniki primrose kubhekwe 16-18 degrees. Uma ekamelweni kuyoba ukufudumala, sizoqala uhlelo ukukhula kakhulu amaqabunga kanye flower efihlekile ziyaphuma ngeke.
Kubalulekile kakhulu ukulandela obkoniki ayakhala, ikakhulukazi ngesikhathi sokuqhakaza futhi luthela. Ukunisela kufanele kube ngokulinganisela, futhi amanzi akufanele iwe on the amaqabunga.
Lesi simila izimbali othanda kakhulu sigqoka. Udinga ukondla mayelana 1 njalo emavikini 2. Ngo isinyathelo Awakening uma kukhona ukukhula mass oluhlaza, umquba kumele aqukethe nitrogen xaxa. Lapho kuqala flower efihlekile, umquba kufanele iqukathe potassium ngaphezulu ukwakha flower efihlekile futhi zezimbali obuningi.
Izici anakekele phakathi nangemva izimbali
Phakathi zom primrose udinga isikhathi ukususa ashwabene imbali umoba kanye namahlamvu. Ngakho amandla ichithwa kwezomnotho, kodwa ngoba nqubo ithatha isikhathi eside.
Lapho zom iphelile, udinga ukususa imbali emthunzini - ngakho ngokushesha ngasibuyisela ifomu yokuqhuma futhi.
Ngemva kweminyaka engu-1-2 isidingo primrose rejuvenate futhi kutshalwe.
Lapho enza ekwindla nasebusika izimbali, amacembe ubudala kufanele usike, uwafake embizeni endaweni epholile. Izitshalo zikhule a amaqabunga abasha, bese sezihlahla ingahlukaniswa futhi utshalwe emhlabathini fresh.
kungenzeka wayethole isifo esithile
Primula obkonika ngokuvamile ogulayo isifo fungal - kulokhu abolile amacembe nezimpande zalesi sihlahla. Futhi mbali ingase babulawa yizifo ezibangelwa amagciwane.
Of izinambuzane eziyingozi ngaphezulu yizimbuzane, Silakho kanye thrips. Cope nabo kuyosisiza ukuba zinambuzane.
Ozithandayo engadini ebhentshini yami